Ny WTN dia mampiato vonjimaika ny Seal momba ny fizahantany azo antoka
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny WTN dia mampiato vonjimaika ny Seal momba ny fizahantany azo antoka
Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN) dia mampiato vonjimaika ny fanomezana ny Safer Tourism Seal. Ny rindranasa ankehitriny dia hiasa aorian'ny famerenana ny programa tombo-kase.
Ranomasina fizahan-tany azo antokaNanomboka tamin'ny fandraisana andraikitra nataon'ny fananganana.travel vondrona fifanakalozan-kevitra ary tafiditra ao anatin'ny tambajotran'izao tontolo izao vao naorina.
Ny filohan'ny WTN Juergen Steinmetz dia nilaza hoe: "Miaraka amin'ny fitomboan'ny aretina COVID-19 amin'ny firenena maro dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanohizana ny hetsika Safer Tourism Seal. Ny tombo-kase dia nomena indrindra ary nifototra tamin'ny fanombanan-tena fa tsy natao hiantohana ny fiarovana izany fa famporisihana. "
“Ny WTN dia hanohy hamoaka ny Safer Tours momba ny fizahantany amin'ny ho avy, ary raha vao tsapantsika fa mety ny fotoana. "
“Manentana ihany koa izahay hanao hetsika mitovy amin'izany ataon'ny fikambanana hafa na fikambanana hafa mba hanao fomba nentin-drazana kokoa.”
Ny loka Hero Hero an'ny World Tourism Network dia hanohy hanome voninahitra ireo izay mihoatra ny andrasana ary hitondra fiovana lehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Tsy misy vidiny ny fanendrena olona na ny loka. Fanazavana fanampiny: www.heroes.travel
Ny World Tourism Network dia tambajotranà matihanina mpivezivezy mihoatra ny 1000 amin'ny firenena 124. Nalefa tamin'ny fomba ofisialy ny WTN tamin'ny herinandro lasa teo.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny hetsika sy ny safidin'ny mpikambana dia mankanesa any www.tv.travel